यी युवतीको भूतसँग प्रेम सम्बन्ध ? अबचाहिँ ब्रेकअपको चाहना – Nepalpostkhabar
यी युवतीको भूतसँग प्रेम सम्बन्ध ? अबचाहिँ ब्रेकअपको चाहना
Hemant KC । ५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०६:४१ मा प्रकाशित
काठमाडौं ः भूत छ कि छैन ? भन्नेबारे धेरैका धेरैथरी दाबी होलान् । विज्ञानले भूतप्रेतको अस्तित्वलाई पूर्णरुपमा नकार्दछ । तर पनि दुनियाँका धेरै मानिसहरु भूतप्रेत रहेको विश्वास गर्दछन् ।